Stefan Kiessling oo sheegay in aalmiintada xaaskiisa uu ku cayaari jiray sir hadda la ogaaday! - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Stefan Kiessling oo sheegay in aalmiintada xaaskiisa uu ku cayaari jiray sir hadda la ogaaday!
December 6, 2018 at 11:55 Stefan Kiessling oo sheegay in aalmiintada xaaskiisa uu ku cayaari jiray sir hadda la ogaaday!2018-12-06T11:55:26+00:00 CAYAARAHA
Stefan Kiessling weeraryahankii hore naadiga Bayer Leverkusen mudo 12-sano ah ka tirsanaa (2006-218) ayaa wargeska The Bild u sheegay in xaaskiisa ay u mar jirtay tijaabada la qaado sida cayaartooyda jirkooda u diyaariyaan neef ahaan iyo aalmiinto ahaan!
Stefan Kiessling ayaa sheegay in xaaskiisa cayaaraha fudud ka qayb qaadato jir ahaana isaga in badan ka diyaarsan tahay sidaa darteed xili walbooo warbixin ku aadan sida tababar ahaan u diyaarsan yahay warbixin laga rabo xaaskiisa ayaa u mari jirtay tijaabaada caafimaad qab ee uu garoon ku gali karo!
Stefan Kiessling xili cayaareedkii hore ayuu isaga fariistay cayaaraha haatana waa agaasime ku xigeenka naadiga Bayer Leverkusen wuxuuna ka mid ahaa cayaartooydii xulka Jarmalka kaga qayb galeen koobkii aduunka 2010 asigoo labo kulan cayaaray.
Stefan Kiessling oo haatan 34-jir ah wuxuu Leverkusen u dhaliyay 162-gool asigoo u cayaaray 444-kulan sidoo kalena xili cayaareedkii 2012/13 gool dhalinta Bundesliga ayuu ku guuleestay wuxuuna ku qaaday 25-gool sidoo kalena labo jeer ayuu ka mid noqday kooxda Bundesliga ugu fiican xili cayaareedyada 2009–10 iyo 2012–13.
« Sir la helay: Hal arrin oo ay Juventus ku xirtay Ronaldo ka hor inta uusan kusoo biirrin oo la ogaaday!
Somali troops launch massive sweep in Baidoa ahead of election »